Dr. Steve Dale —— Daaweynta khaldan ee milkiilaha Eyga micnaheedu waa eeyaha si tartiib tartiib ah ayuu u dhaawacmay
Caan ka noqoshada adduunka ee xayawaanka rabaayadda ah, waxay dhab ahaantii muujineysaa in xiriirka ka dhexeeya dadka uu sii kala fogaanayo. Ma aha oo kaliya waayeelka buulkoodu buuran yahay ee kelinimada ah. Sababtoo ah taageerada waxqabadyada jahawareerka bulshada kuma filna in laga yareeyo culeyska fekerka, xayawaanku waa sabab muhiim ah ...
Dunida waxaa ka jira noocyo badan oo xayawaan ah, oo qaarkood ay bini aadamku korsadaan oo ay noo raacaan si aan ugu noolaano xubin qoyska ka mid ah. Kordhinta tirada xayawaanka guryaha ku jira, waxaa sidoo kale kor u kacaya isticmaalka xayawaanka. Sida loo doorto badeecad qiimo jaban oo habboon oo loogu talagalay xayawaanka guriga jooga ...
Dad badan ayaa sheegaya in eey qurux badan uu la mid yahay ilmo qalbi hodan ah laakiin aan hadlin. Xaqiiqdii, eeyga indhihiisa aan waxba galabsan iyo muujinta xiisaha leh ma ahan sida fudud oo quruxsan sida ilmo? Si kastaba ha noqotee, haddii aad ula dhaqanto eeyga sida cunugga, waad khaldami lahayd. Waad ogtahay, nuxurkeedu wali waa xayawaan si kastoo ...
Dowladda Hong Kong waxay soo saartay Febraayo 28 in eey ku nool guriga bukaan COVID-19 uu leeyahay falcelin daciif ah oo daciif ah oo ku saabsan baaritaanka fayraska. Muuqaal kale oo muuqaal ah oo ku saabsan Maraykanka oo ah baadhitaan xayawaan ah oo laga helay fayraska sababa COVID-19 wuxuu ahaa shabeel qaba cudur neefsashada ah oo ...
Dadka deegaanka xayawaanku ma shaqeeyaan runtii? —–Beelaha Xayawaan ee ugu Fiican
Korodhka degdegga ah ee milkiilayaasha xayawaanka, dhibaatooyinka sida xayawaanka la dayacay, bisadaha iyo eeyaha baadi ah, xayawaannada wax yeeleeya dadka si joogto ah ayey u muuqdaan. Waa deg deg ururada maaraynta xayawaanka magaalooyinka inay adeegsadaan GPS si ay uga caawiyaan xalinta dhibaatooyinka kala duwan ee xayawaanka keena macluumaadka liita. Intaas waxaa sii dheer, bisadaha iyo eeyaha ayaa ...
Milkiilayaasha Eyga Da'da yar ee Minefield — Eyga ugu yaraan jecel "qol madhan"
Xogta waxay muujineysaa in milkiileyaasha xayawaanku ay u muuqdaan kuwo da 'yar, jiilka yar yarna waxay sii kordhayaan raadinta tayada nolosha ruuxiga ah. Laga soo bilaabo qurxinta xayawaanka, daaweynta caafimaadka, iyo isdhexgalka tikniyoolajiyadda sare, milkiileyaasha xayawaanku waa inay lahaadaan awood dhaqaale oo xoog leh. Waxaa jira isbeddelo cusub oo ku saabsan fikradda daryeelka xayawaanka ...
Ka ilaalinta aagga masiibada farta wiilka “eeygu cunayo”
Dhawaan, wiil 4-sano jir ah oo ka tirsan qoyska xaafadda Utah iyo laba xabo oo guriga deriska ah… Maxaa dhacay? Waqtigaas, wiilka yar wuxuu ku ciyaarayay daaraddiisa. Guriga deriska ah ee ay oodda cad ka soocday guriga wiilka yar ayaa leh laba doqon oo doqon ah. In kasta oo uu ...